Gịnị bụ nchịkọta? Teknụzụ Nchịkọta Na-eme Mkpebi Mgbasa Ozi
Oge ụfọdụ anyị kwesịrị ịlaghachi n’ihe ndị bụ isi ma chee maka teknụzụ ndị a na otu ha ga-esi nyere anyị aka. Nchịkọta na ọkwa kachasị dị na ya bụ ozi sitere na nyocha usoro nke data. Anyị atụlewo okwu nyocha ruo ọtụtụ afọ ugbu a mana oge ụfọdụ ọ dị mma ịlaghachi na isi.
Nkọwa nke nchịkọta ahịa
Marketing nchịkọta mejupụtara usoro na teknụzụ ndị na-enyere ndị ahịa aka ịtụle ihe ịga nke ọma nke ahịa ha site na ịlele arụmọrụ (dịka, ịde blọgụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbasa ozi na ntanetị) site na iji usoro azụmahịa dị mkpa, dị ka ROI, njirimara ahịa na njikwa ahịa zuru oke. Yabụ, ọ na-agwa gị etu mmemme azụmaahịa gị na-arụ ọrụ n’ezie. site na SAS
Kedu ihe nyocha - Video si IBM
Banyere na ịre ahịa n'ịntanetị, Web Analytics nyiwe bụ sistemụ na nakọta, kpokọta ma kọọ na ọrụ ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta. Enwere subsets nke nchịkọta na ndị ahịa kwesiri ịmara ma jiri site n'oge ruo n'oge:
Nchịkọta Omume - ụzọ ndị ọbịa na-eso na otu ha si emekọrịta na ibe ọ bụla bụ data dị oke egwu iji ghọta etu enwere ike isi tinye saịtị gị maka itinyekwu aka na ntụgharị. Ọtụtụ ndị na - echekwa naanị saịtị mara mma ma chefuo na ọ bụ n’ezie ụzọ ga - esi azụ ahịa. Enwere otutu mmụta sayensị na ahụmịhe enwere ike itinye n'ọrụ iji bulie uru nke saịtị gị na azụmaahịa gị.
Ndị isi ahia ego - ma ọ bụ bi nchịkọta na-emezi ihe niile gbasara ọrụ gị, site na ịre ahịa na arụmọrụ yana ịkọwa ajụjụ, maka ndị isi na-ahụ maka omume ụlọ ọrụ. BI bu ihe ndi ozo, ndi ozo na ndi oru nlebara anya.
Nchịkọta ntụgharị - ntughari na saịtị bụ ọrụ bara uru. Ihe kachasị pụta ìhè bụ ịzụta na saịtị ecommerce. Agbanyeghị, ọ bụrụ na saịtị gị na-akwalite ọrụ, ntụgharị nwere ike ịbụ ọnụọgụ ndị ọbịa na-edebanye aha maka nnwale n'efu, ngosi, nbudata, webinar ma ọ bụ ọrụ ọ bụla egosiri na ọ bara uru. Ntughari nchịkọta na-etinye nnwale nke ihe dị iche iche ka ị nwee ike ịkwalite saịtị ahụ iji gbanwee ndị ọbịa karịa n'ime ndị ahịa.
Nchịkọta ọgụgụ isi nke ndị ahịa - ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị arụsi ọrụ ike nyochaa ma ndị ahịa ha na-amasị ha ma ọ bụ na ọ bụghị ihe mgbochi na-egbochi njikọ zuru oke. Usoro ndị na-enye ohere nzaghachi ndị ahịa site na ọwa mmekọrịta, nyocha na isi ihe nchịkọta data ndị ọzọ nwere ike ịnye nyocha bara oke uru banyere otu esi ahụ ụlọ ọrụ gị yana ihe ị nwere ike ime iji meziwanye ya.
Nchịkọta Ndụ Ndị Ahịa - understandingghọta usoro nke onye ahịa gị dị mkpa iji mee ka njide ndị ahịa dị elu, na-akwalite ọnụ ahịa ndị ahịa, yana ịkọwapụta ọdịnihu na-eduga megide njikọta kachasị nwee nke ị nwere. Ole na ole nyiwe na-atụle usoro yana ndị na-akwado ngwa ahịa ahịa anyị Right Na mmekọrịta, Jide n'aka na ị ga-enweta ngosi nke usoro ha.
Nchịkọta ozi - akpaaka ahịa, email, igbe ozi, SMS, ekwentị, na sistemụ ozi ndị ọzọ nchịkọta iji nye gị ọrụ kwa mkpọsa, debanyere aha ọrụ, ma na-mgbe iwekota na ndị ọzọ nchịkọta sistemụ iji nyere aka melite ozi gị na mkpọsa gị.
Ntinye amụma - dabere na arụmọrụ gara aga nke saịtị gị, nyiwe ndị a na-ebu amụma ihe omume ndị ọbịa ga-enwe n'ọdịnihu. Amụma nchịkọta nyiwe na-enyekarị ụdị ebe ị nwere ike ime mgbanwe ma kwupụta mmetụta nke mgbanwe ndị ahụ na arụmọrụ saịtị gị. Ọmụmaatụ, gịnị ma ọ bụrụ na ị belata ụgwọ gị kwa Pịa na ọkara ma mụbaa mmefu ego infographic gị?
Nchịkọta oge - nye nghọta n'ime ọrụ na omume nke ndị ọbịa na saịtị gị ugbu a. Ozugbo nchịkọta enwere ike ịbanye iji gbanwee omume nke ndị ọbịa, mee ka ọ dịkwuo mfe ịtụgharị, ma nye mmata nke oge nzaghachi oge na nkeji nke saịtị gị.
Ahịa Ahịa - Nkwado ire ahia bụ ngalaba teknụzụ na-eto eto. Dashboards dị ka ndị na-akwado anyị na Ahịa jikọta gị na Salesforce CRM gị ma nye njikwa azụmaahịa nkọwa niile ha chọrọ iji hụ ma buo amụma arụmọrụ. Maka onye na-ere ahịa, sistemụ ndị a na-enyere ha aka ịbawanye arụpụta ọrụ, bulie akara aka, ma mechie azụmahịa buru ibu ngwa ngwa.
Nchịkọta ọchụchọ - backlinks bụ akara ọla edo nke ogo na ntanetị na ọkwa na-eme njem na ntụgharị. N'ihi ya, ngwaọrụ ndị na-enyere gị aka inyocha gị isiokwu ọchụchọ, ndị na-asọmpi, na otu ọdịnaya gị si dị nwere ike inyere gị aka ịdọta ndị ọbịa ọhụụ ma wuo usoro ọdịnaya nke na-achụ azụmaahịa. Nyochaa akwụ ụgwọ nchịkọta nye gị arụmọrụ isiokwu na metrik ntụgharị ka ị nwee ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ gị ọ bụla ma bulie ahịa.
Nchịkọta Mmadụ - dịka ntanetị mepụtara, ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ ewulitela ikike na-eme ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ na-eto eto. Na-elekọta mmadụ nchịkọta nwere ike ịlele ikike ahụ, soro ogo mmekọrịta gị, nyere gị aka ịghọta ihe kpatara ndị mmadụ ji eso gị na isiokwu ndị ha na gị kacha emekọrịta. Inyere gi aka itolite iso ndi mmadu na ikike na-ebutekarita inwe ntukwasi obi n’etiti ndi na ege gi ma obu obodo gi - nke enwere ike iji kwuputa nkwalite gi ma obu bugharia ntughari.
N'ezie, usoro ndị a niile nwere ike ịnye ozi buru oke ibu ma na-eduga na ya nyocha ahumkponwu. Ọ dị mma ịhụ nchịkọta nyiwe mepee API ha ma jikọta ha na ndị ọzọ iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa na-akpaghị aka. Nnukwu nkatọ m na-akatọ nchịkọta nyiwe bụ na ha na-anakọta ma kọọ data, mana ọ na-abụkarị na ha na-atụ aro. Ihe nyocha nke ntughari na-eme nke a - Achọrọ m ka ndị ọzọ! Dịka ọmụmaatụ, anaghị m aghọta ihe kpatara ya nchịkọta nyiwe adịghị enye nghọta na usoro dị na ọdịnaya ma nye gị aro maka ihe ị kwesịrị ide banyere ya.
Tags: nyocha omumeọgụgụ isi azụmahịantughari ntughariNkọwa nke nchịkọtaNkọwa nke nchịkọta ahịankọwanchịkọta emailGoogle Analyticsotú nchịkọta si arụ ọrụotú ọ na-arụ ọrụIBMnchịkọta ahịanyocha oziomniturenchịkọta amụmaezigbo oge nchịkọtanchịkọta saịtịnchịkọta mmadụnchịkọta mmadụ mgbasa oziweb analyticsnchịkọta weebụwebụsaịtịihe nyocha